စစ်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ထောက်ပို့စစ်ကြောင်းအား KIA ရှင်းလင်းတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ – BNN
၁၅ . ၁၀ . ၂၀၂၁ ခုနှစ်
၁၄.အောက်တိုဘာလ.၂၀၂၁ ခုနှစ် ညနေပိုင်း ၆:၀၀နာရီဝန်းကျင်၌ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA,တပ်မဟာ ၃ ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်သောရွှေကူမြို့၊ပိန်းခွန်ရွာသို့ နယ်မြေရှင်းလင်းရေးခေါင်း‌စဉ်ဖြင့်ကျောက်ကြီးကျေး ရွာမှပို့ဆောင်ထားသောစစ်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အင်အား ၂၀၀ ကျော်ခန့်အဖွဲ့အား KIA,တပ်မဟာ ၃ တပ်ဖွဲ့များမှဝိုင်းဝန်း ပိတ်ဆို့မိုင်းဝိုက်ထောင်းထားနိုင်ခဲ့သဖြင့်စစ်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်အဖွဲ့မှ ၎င်းဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ခံထားရသောတပ်ဖွဲ့များအား ကယ်ထုတ်ရန်ဆက်လက်ချီတတ်လာသော‌ ထောက်ပို့စစ်ကြောင်းအင်အား ၃၀၀ ကျော်ခန့်ကို KIA, တပ်မဟာ ၃ ၊အမှတ် ၁၂ တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များနှင့်ရွှေကူ PDF အဖွဲ့များမှရွှေငြိမ်း ချမ်းကျေးရွာနေရာ၌ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းအောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။
Credit – ★ 𝐍𝐢𝐧𝐠 𝐆𝐚𝐰𝐧【 𝐙.𝐍.𝐆 】